वैदेशिक रोजगारीको परिणाम : 'न रह्यो सम्पती, न रहिन श्रीमती' - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
आज धोनीको जन्मदिन: यस्ता छन् उनका ३० कीर्तिमान
वैदेशिक रोजगारीको परिणाम : ‘न रह्यो सम्पती, न रहिन श्रीमती’
- दीपक आचार्य
मेरो नाम दीपक आचार्य हो । घर चितवन । हाल बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुँवेतमा छु । २१ वर्ष पहिले नवलपरासी जिल्ला कावासोतीकी चुनुउषा देवकोटासँग मेरो बिवाह भयो । हाम्रा दुई सन्तान पनि छन् । हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले चुनुउषा र मैले सल्लाह गरेर परदेशियौं । चुनुउषा इजरायलमा केयरगिभर (सुसारे) छन भने म हाल कुँवेतमा गाडी चलाउने काम गर्छु । ८ वर्ष कतारमा बसे । कतारमा राम्रो कमाइँ नभएपछि ड्राइभर भिसामा कुँवेत आए । कतार र कुँवेतमा रातदिन काम गरेर कमाएको पैसा र चितवनको माडीमा रहेको मेरो पुख्र्यौली खेत बेचेर चितवनको भरतपुर नगरपालिकामा घडेरी किनेर घर लगाएँ ।
छोराहरुलाई पोखरामा बोडर्समा राखेर पढाउँदै थिएँ । घर ब्यवहार पनि राम्रै चलेको थियो । जन्मदिने आमाबुबा भन्दा श्रीमती (चुनुउषा) को बढी विश्वास गरे । आफूले विदेशीभूमिमा कमाएको जेजति पैंसा छ चुनुउषाकै नाममा पठाउने गर्थे । विश्वास नगरौं पनि कसरी ? हामीले दुईटै मुटुको एउटै धड्कन बनाएर सँगै जिउनेमर्ने भनेर बाचाकसम खाइँबरी बैवाहिक जीवनमा बाँधिएका थियौं । बिवाहपछि हाम्रो घरपरिवार राम्रै सँग चलेको थियो । एकदिन चुनुउषाले मसँग आफू पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुरा बताइन । मैले हुन्छ भने र सल्लाह गरेरै उनी इजरायलमा केयरगिभरमा गइँन् । इजरायल कामदारका लागि उचित र श्रमशोषण नहुने देश हो भनेर सुनेको थिएँ र ऋणदान गरेर घरपरिवारले उनलाई इजरायल पठायौं । छोराहरु पनि हुर्कि सकेकाले केही वर्ष उनले इजरायलमा बसेर कमाउने र मैले कुँवेतमा बसेर कमाउने सोचविचार गरी भविश्यमा छोराहरुलाई राम्रै कलेजमा पढाएर ठूलो मान्छे बनाउने हाम्रो उद्देश्य थियो । साथै सानोतिनो घरघडेरी जोड्ने र बुढेसकालमा हामी बुढाबुढीलाई आर्थिक समस्या पर्दा अरुलाई हात थाप्न नपरोस भन्ने थियो ।
तर, मेरो त्यो सपना सपनामै सिमित रह्यो । खोर्इ कुन बैरी आइलाग्यो या मेरो दशा ? घरमा घरब्यवहार सम्हाल्ने मेरो बृद्ध बुबा हुनुहुन्छ । उहाँकै जिम्मा सम्पूर्ण घरब्यवहार सुम्पेर चुनुउषा र म विदेशिएका थियौं । तर, चुनुउषा इजरायल गइसकेपछि उनले नेपाल (घर) मा मेरो बुबालाई पैसा पठाउन छोड्नु भयो । दिन प्रतिदिन बिनाकारण म र मेरो परिवारबाट टाढिँदै जान थालिन् । राम्रै सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि किन चुनुउषाजी म र मेरो परिवारबाट टाढिँन लागिन् भनेर सोधखोजतिर लागे । बुझ्दै जाँदा उनी त एकजना इजरायलीको प्रेमजालमा परेकी रहेछन् । म कुँवेतमै थिएँ । चुनुउषाजीले इजरायलस्थित नेपाली राजदूताबासबाट मसँग सम्बन्धबिच्छेद मागिन् ।
यसरी सम्बन्धबिच्छेद माग्नुको कारण चुनुको इजरायली नागरिक मिखायल पेरेस भन्ने ट्याक्सी ड्राइभरसँग सम्बन्ध भएको कारण रहेछ । म भने मैले कुँवेतमा चलाउने तेलको टयांकर बोक्ने गाडी दुर्घटना परेको कारणले कुँवेत छोड्न नपाउने अवस्थामा थिएँ । अझै पनि छु । मेरो अनुपस्थिती र मेरो कुरा राख्ने अवस्था नै नदिई चितवन अदालते मेरो र चुनुउषाको सम्बन्धबिच्छेद गराइदियो । मेरो पिरमर्का नबुझेरै अदालतले हाम्रो सम्बन्धबिच्छेद गराइदियो । मैले विदेशमा नखाइ नलगाइ र पुख्र्यौली सम्पत्ती बेचेर जोडेको घरघडेरी पनि चुनुउषाजीकै भयो । मेरो भने बेहाल । यतिबेला चुनुउषाजी आफ्नो इजरायली प्रेमीलाई पनि नेपालमै लिएर बसेकी छन् । मैले जोडेको सम्पत्ती बेचेर केही दिनमा इजरायल फर्कदै छन रे । मैले सुनेअनुसार चुनुजीको चार महिनाको गर्भ पनि रहेको छ रे । वाह, चुनुजी इजरायलीसँग मायाजालमा परे भन्दै भएको घरबार तहसनहस बनाउने ।
घरमा रहेका बृद्ध सासुससुराको सडक बास बनाउने यही हो मायाजालको नाममा, पैसाको नाममा मानवियता रु अलिकति भएपनि हाम्रो बिगतलाई हेर्नुस् । त्यो इजरायलीको क्षणीक मायारुपी भ्रममा नपर्नुस । एकपटक सोच्नुस त ती बृद्ध सासुससुराले के नै बिराएका थिए र आज उहाँहरुलाई घरबाट निकालेर रोडमा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? यही हो सामाजिक न्याय र मानवियता ? यसको जवाफ म कहाँ र कसरी लिउँ ? चुनुजी आफैं बिनाकारण मबाट अलग हुने फेरी मेरा बृद्ध बुबाआमालाई जे पनि गरिदिन्छु भनेर धम्क्याउने । छोरालाई पनि विभिन्न प्रभोलनमा पारी मेरै बिरुद्ध लगाउने । यो कहाँको कस्तो न्यायसंगत हो ? म गाडी दुर्घटनाका कारण कुँवेतमा साह्रै पीडामा छु त्यसैमा हजुरले नूनचुक छर्ने ? मैले त्यस्तो के नै बिराएको थिएँ र पीडामाथि पीडा थप्ने गरी ?
एकपटक चिसो दिमागले सोच्नुस् । मेरो आग्रह छ त्यो इजरायलीको क्षणीक भ्रममा नपर्नुस । र छोराको नाममा वाह, छोरा तिमीलाई मैले अर्काको देशमा रातदिन काम गरेर हुर्काएबढाए । पढाए । तिम्रो खुशीका लागि ऋणदान गरेर मोटरसाइकल किने । त्यतिमात्र होइन भोकै बसेर, झुत्रै लुगा लगाएर सकेसम्म तिम्रा हरेक चाहना पूरा गरे । आज सबै भुल्यौं हैं ? आज तिमी पनि भएभरको दोष मलाई थोपर्दै छौं रे । अब त तिमी सानो पनि छैनौं । २० र २१ वर्षको लक्का जवान भइसक्यौं । एकपटक सोचन है के तिम्रो मामुले गरेको काम ठीक हो र ? मैले र मेरा बृद्ध बुबाआमाले के नै नराम्रो गरेका थियौं तिमी र तिम्रो मामुलाई ? म जस्तो सामान्य मान्छेलाई आज तिमी र तिम्रो मामु भएर मलाई किन जिउँदै बारबार मार्दै छौं ?
हुन त मसँग तिम्रो मामुको जस्तो इजरायली पैसा छैन होला तर इमान जमान छ । एकोहोरोरुपमा मामुको बहावकापमा नपरी आफ्नो घरपरिवार सम्झौं । पैंसा नै सबथोक होइन । सत्यतथ्य बुझ । मामाघरमा बसेर बारम्बार हजुरबा र हजुरआमालाई धम्क्याउँदै छौं रे । मेरो मामुको बिहे मैले गरिदिएको हुँ तिमीहरुलाई के को खसखस ? धेरै कुरा नगर्नु जतिबेला जे पनि गरिदिन्छु भन्छौं रे । आज त्यो इजरायली नागरिक तिम्रो नजिकको भयो, पालनपोषण गर्ने हजुरबुबा हजुरआमा र जन्मदिने बुबा म टाढाको हैं ?
हुन त तिमी मावली घरमा बस्छौं त्यहाँ संस्कारै त्यस्तै छ की क्या हो रु त्यस्तै संस्कार सिक्नु धन्यवाद बाबु । अन्तमा, म बाध्यताबश घर आउन नसकेपनि घटनाको वास्तविकता बुझेर मलाई सहयोग गर्ने चितवन समाज इजरायल, माडीको टोल सुधार समिति लगायत सम्पूर्ण इष्टमित्रहरुलाई हार्दिक धन्यवाद तथा आभार । आउँदा दिनहरुमा पनि तपाइँहरुले सत्यतथ्य बुझी अझै सहयोग गर्नुहुने छ भन्ने आशा राखेको छु ।